Onlinepatra.com - टिप्स
अन्लाइन पत्र संवाददाता २१ चैत्र २०७६, शुक्रबार १९:३२ 0
कुन बारमा कुन देवी-देवताको पूजा गर्ने
अन्लाइन पत्र संवाददाता २१ चैत्र २०७६, शुक्रबार ००:३५ 0
हिन्दु धर्ममा, हप्ताको हरेक बारलाई देवी-देवताको बार मानिने गरिन्छ। विशेष व्रत र उपवास बाहेक, अधिकांश हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले हप्ताको कुनै एक वा दुई दिन सोहि बारअनुसारको देवताको पूजा गरि व्रत बस्ने गर्दछन्। हरौँ, हप्ताको कुन बार कुन-कुन…
अन्लाइन पत्र संवाददाता १९ चैत्र २०७६, बुधबार १७:३२ 0
अहिले नेल आर्ट विदेशमा मात्र नभएर नेपालमा पनि निकै लोकप्रिय हुन थालेको छ । नङमा विभिन्न रङ लगाएर आफूलाई मनपर्ने बुट्टा, हाँगाका साथै अन्य आकृति कोर्नुलाई नेल आर्ट भनिन्छ । नङलाई विभिन्न रंग–रूप दिएर लामो, चेप्टो वा यु सेप दिएर…
अन्लाइन पत्र संवाददाता १८ चैत्र २०७६, मंगलवार १०:४१ 0
पानीपुरी भनेपछि थप ब्याख्या गरिरहनु नपर्ला । धेरैलाई पानी पुरी स्वादीलो लग्न सक्छ । घर बाहिर पानीपुरी खानुभन्दा त घरमै पानी पुरी बनाएर खानु स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो । आज हामी तपाईहरुलाई आफ्नै घरमा स्वादिलो र स्वस्थ पानीपुरी…
अन्लाइन पत्र संवाददाता १८ चैत्र २०७६, मंगलवार ०१:२६ 0
१) लसुनः लसुनले एक प्राकृतिक एन्टी बायोटिक र सुगरलाई नियन्त्रित गर्ने काम गर्दछ । लसुनले शरिरमा ती हर्मोनलाई सक्रिय गर्न काम गर्दछ जसले बोसोलाई जम्मा हुन दिँदैन । आफ्नो खानामा लसुनलाई समावेश गरेर हेर्नुहोस् । २) ग्रीन टीः पछिल्लो…
अन्लाइन पत्र संवाददाता १८ चैत्र २०७६, मंगलवार ०१:१६ 0
काठमाडौं - गर्मीको समयमा कपाललाई अतिरिक्त सुरक्षा र हेरचाहको आवश्यक्ता पर्ने गर्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार नारिवलको तेलले टाउको र कपाललाई मसाज गर्नपर्छ । समय/समयमा कपाललाई तलबाट कटाउँदा अरु कपाललाई समस्या हुँदैन । धेरै लामो कपाल भयो…
अन्लाइन पत्र संवाददाता १८ चैत्र २०७६, मंगलवार ०१:०८ 0
आफू बस्ने घर सुन्दर होस् भन्ने कसलाई नलाग्ला र । त्यसमा पनि मोहक फूलले ढाकिएको घर भए अझै राम्रो । तर सहरी क्षेत्रमा खुल्ला जमिनको अभावमा घरमा फूलको वासना लिन सकस नै हुन्छ । यसको अपाउ भने नभएको हैन । जमिनमा खाली स्थान नभएको घरमा छत छ…
तपाईंको शरीरमा मुसा छ ? यसरी सावधानी अपनाउनुहोस्
अन्लाइन पत्र संवाददाता १७ चैत्र २०७६, सोमबार २१:४९ 0
मुसा एक किसिमको भाइरल संक्रमण हो । मुसालाई अंग्रेजी सब्द वाट्र्स हो । ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसका कारण मुसा आउँछ । एचपिभीको सयौं प्रजातिले विभिन्न प्रकारका मुसा शरीरको विभिन्न ठाउँमा निकाल्छन् । सामान्यतया: यो हातखुट्टामा आउने भए पनि…
कौसीमा कसरी लगाउने धनियाँ ?
अन्लाइन पत्र संवाददाता १७ चैत्र २०७६, सोमबार ०९:०७ 0
यदि तपाईलाई पनि कौसीखेतीको शुरुवात गर्ने मन छ भने धनिया रोप्नुहोस। यदि धनियाँ उमार्न र हुर्काउन जान्नु भयो भने तपाईले धेरै कुरा फलाउन सक्नुहुन्छ। हरियो धनियाँ तयार पार्न सुन्दा सजिलो भएपनि काम गर्न चाहि त्यति सजिलो छैन। धनिया बियाँ…
अन्लाइन पत्र संवाददाता १५ चैत्र २०७६, शनिबार १०:०१ 0
काठमाडौं - समय एकैनाशले चल्दैन् । आज जे छ त्यो भोलि पनि रहन्छ भन्ने एकिन गर्न सकिदैन् । भविष्यमा के हुन्छ ? कसले पो देखेको हुन्छ र ? जीवनमा कत्ति बेला के–के जोखिम आईपर्ने हुन् कसलाई के थाहा ? भविष्यमा जोखिमले ‘म आए है’ भन्दै पक्कै पनि…